Ukuwela iRaven's-Kate's Cottage - I-Airbnb
Ukuwela iRaven's-Kate's Cottage
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguLori
Wamkelekile kwiRavens' Crossing, ifama yee-1850 eMidcoast Maine kwidolophu yaseAppleton.
Ngeezindlu zeendwendwe ezimbini onokukhetha kuzo, uya kuzifumana ukwindawo enoxolo, ezolileyo.
Isidlo sakusasa yi-$25, sisiwa kwikhabhathi yakho. Ibhafu ekwabelwana ngayo estudio.
Abemi bomthonyama baseMelika bakholelwa ukuba amahlungulu anokwenza ucwangco kwisiphithiphithi. Sikunika ithuba lokuthatha ixesha kunye nendawo ukwenza iodolo yesiphithiphithi sakho.
Ibekwe phakathi kwamadlelo aqengqelekayo, amahlathi aqinileyo namaplanga athambileyo, iRavens' Crossing ibonelela ngabucala, ukuba uwedwa, kunye nentaphane yezinto zonyango eziyilelwe ukuphumla, ukubuyisela kunye nokuhlaziya. Iimayile zeendlela ziyafumaneka ukuze uzintywilisele kubuhle kunye nokugqibelela kweNdalo kwaye uhlaziye unxibelelwano lwakho kuyo.
Njengoko imozulu itshintsha kwaye neentsuku zibanda; I-Kate's Cottage iya kuvalwa kude kube yintwasahlobo. IKhabhinethi yokuRetreat isafumaneka kwaye ipholile ngesitovu senkuni.
Nokuba ukhetha ukufumana i-massage, phumla kwi-sauna ephekwe ngamaplanga, ukucwina kwi-tub eshushu, kunye / okanye uchithe ixesha kwenye yee-cottages zethu, unokugqiba ukuba iminqweno yakho yokubuyela umva inokufezekiswa njani.
Indawo yaseMidcoast luluntu olutyebileyo nolwahlukeneyo, ukusuka kwiiMarike zamaFama asekuhlaleni, iindawo zewayini, iigalari, kunye neeresityu. Unxweme lukumgama oziikhilomitha ezingama-20 kwaye le yindawo entle yokuhamba, ibhayisekile, i-xcountry ski, ukonwabela amachibi, imilambo, kunye nolwandle ngamaxesha onyaka.
Kwindawo: ukukhwela intaba, ukukhwela ibhayisekile, ukuhamba ngekhephu, ukutyibilika ekhephini, isauna, imassage, ibhafu eshushu, ukubukela iintaka, izilwanyana zasendle, ipikniki, ukujonga iinkwenkwezi, okanye ukubhala, ukufunda, ukubhala, ukwenza umsebenzi wobugcisa, umculo, ukucamngca.
Unxibelelwano neendwendwe luncinci kakhulu. Ukujonga ixesha kukuphela konxibelelwano. Ukuba uyaodola isidlo sakusasa, sisiwa emnyango wakho nge-$10 yomntu.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Appleton